Shirkadaha diyaaradaha ee Yurub ayaa u diyaargaroobaya xilliga jiilaalka ee adag
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Yurub » Shirkadaha diyaaradaha ee Yurub ayaa u diyaargaroobaya xilliga jiilaalka ee adag
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caafimaadka Warka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Inta lagu jiro xilliga caadada u ah Yurub, masiibada waxay u badan tahay inay ka dhigto xaaladaha hawlgalka mid adag.
Iyadoo dakhligii weli la cabudhiyay, ayaa shirkadaha duullimaadyadu waxay leeyihiin jiilaal adag.
Noocyada cusub ee COVID-19 ayaa laga yaabaa inay yareeyaan rabitaanka dadka safarka ah inay duulaan.
Kharashka shaqaaluhu wuu kici doonaa waana in go'aanno adag oo maaliyadeed la gaaraa.
Shirkadaha diyaaradaha ee Yurub ayaa qarka u saaran inay wajahaan jiilaal adag sababtuna tahay masiibada socota iyo kalsoonida safarka oo laga yaabo inay sii socoto. Qiimaha jaban wuxuu fure u noqon doonaa kicinta dalabka maaddaama xannibaadaha safarka ay u badan tahay inay sii socdaan.
Iyadoo dakhligii weli la cabudhiyay, ayaa shirkadaha duullimaadyadu waxay yeelan doonaan jiilaal adag. Inta lagu jiro waxa dhaqan ahaan ah xilliga fasaxa ee Europe, masiibada waxay u badan tahay inay adkayn doonto xaaladaha hawlgalka.
Inkasta oo dalabku bilaabmay inuu soo laabto xagaagan, jiilaalku wuxuu noqon karaa sheeko kale. Kiisaska COVID-19 ayaa suuragal ah inay kor u kacaan, waxaana dhici karta in noocyo kala duwan ay soo baxaan, taasoo yareyneysa rabitaanka socdaalka ee duullimaadka. Iyadoo dawlado badan ay soo afjareen taageeraddii xad -dhaafka ahayd, oo ay ka mid yihiin UK, kharashka shaqaaluhu si lama huraan ah ayuu u kici doonaa, waana in la qaataa go'aamo maaliyadeed oo adag. Dheelitirnaan xasaasi ah waa in la helaa inta u dhexeysa adeegidda meelo badan iyo ilaalinta kharashaadka hawlgalka. Duulimaadyadu waa inay noqdaan kuwo jilicsan si loo hubiyo badbaadada.
Rakaabka ayaa laga yaabaa inay sii wadaan inay dib u dhigaan qorshayaasha safarka jiilaalkaan sababtuna tahay hubanti la'aan badan. In kasta oo soo bixitaanka tallaalka Yurub uu si fiican u socdo, haddana kala duwanaanshaha Delta waa walaac. Iyada oo waddamada qaarkood ay la halgamayaan xakameynta fayraska, xayiraadaha safarka ayaa u muuqda inay sii jiraan. Safarrada qorshayntu waxay sii ahaan doonaan kuwo sii murugsan xannibaadyada mar walba isbedelaya sida shardiga tijaabooyinka xun ee COVID-19 ee gelitaanka dhulal badan. Intaa waxaa dheer, xayiraadaha safarka ayaa ah caqabadda labaad ee ugu weyn in la safro, iyada oo 55% jawaabeyaasha ra'yiururintii ugu dambeysay ee warshadaha ay ku sheegeen sababta looga fogaado safarka. Shabakadaha wadadu waa inay diiradda saaraan meelaha loo socdo oo xaddidan Xayiraadaha waana in la qaadaa hab deg -deg ah/wax -qabad leh.
Tartanka u dhexeeya shirkadaha duullimaadyada ee Yurub wuxuu ahaa pre-COVID daran oo inta badan qiimuhu wuxuu ahaa qodobka go'aamiya dadka socotada ah marka ay dooranayaan diyaarad. Iyada oo ay u badan tahay in hubin la'aanta baahida loo qabo jiilaalkaan, dhiirigelinta ballansashada ayaa noqon doonta yool muhiim ah.
Hoos u dhigista qiimaha si loo kiciyo baahida waxay noqon doontaa xeelad la geeyay jiilaalka si loo buuxiyo kuraasta. Tani waxay soo jiidan kartaa 57% jawaabeyaasha reer Yurub kuwaas oo qiimeeyay qiimaha inay yihiin qodobka ugu muhiimsan marka la dooranayo astaanta diyaaradda, sida lagu sheegay ra'yiururin dhowaan la sameeyay. Qiimaha ayaa muhiim u noqon doona dhiirigelinta socdaalka ku-meel-gaadhka ah iyo diyaaradaha jaban ee jaban waxay u badan tahay inay noqdaan kuwa duullimaadyada ugu badan jiilaalkaan. Iyada oo socdaalayaashu sii wadaan inay u safraan meel u dhow guriga, shabakadda ballaadhan ee reer Yurub ee sidayaashaan waa inay ka faa'iidaystaan ​​faa'iidadooda.